Ngokwazi Ukuvakashela i-Vatican City nge wesitimela uya, kukhona yesimanje isitimela kagesi etholakalayo bonke abathanda Vatican. Isitimela sixhuma iVatican City sesitimela nama-Pontifical Villas.
St. Peter’s Basilica yaziwa kakhulu lapho kuvakashelwa iVatican
Ubuhle St. Basilica kaPetru mhlobiso of Vatican, olwakhiwa ngalokho kucatshangwa ukuthi lapho St. Peter's burial place.
UMuseo Pio Clementino ngenkathi evakashele iVatican
Ukujabulela uhambo lwakho ngenkathi uvakashela iVatican City ngesitimela, Sesha imvelaphi yakho bese ukhetha iRoma Londoloza zemininingwane iwebhusayithi ukubhuka a ithikithi isitimela kungakapheli imizuzu kanye uqale amadlingozi yakho Vatican ngokushesha kunokuba ufisa kulindeleke!
#i-Vatican i-roma Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ukuhambahamba travelrome vaticancity